ठूला लगानीकर्ताले सेयरमूल्य घटाएर आफैले किनिरहेका छन्, साना लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्छ : पूर्वगभर्नर क्षेत्री | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
ठूला लगानीकर्ताले सेयरमूल्य घटाएर आफैले किनिरहेका छन्, साना लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्छ : पूर्वगभर्नर क्षेत्री
नाफामात्रै हामीले खाने हो भन्नेहरूलाई प्रचण्डको अभिव्यक्ति थप्पड हो
मंसिर २८, २०७८ | दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा कतिपय उद्यम/व्यवसायलाई प्रश्रय दिने अथवा जगेर्ना गर्ने काम स्वाभाविक हो । जसले आफ्नो पैसा लगानी गर्छन्, सेयरबजार त्यस अतिरिक्त बाहिरबाट समेत स्रोत र साधन परिचालन गर्न निकालिएको एउटा पद्धती हो । त्यो पद्धती व्यवस्थित तरिकाबाट चल्छ भन्ने अपेक्षा राखिन्छ । तर, यसमा धेरै किसिमका ‘यदि’ र ‘तर’ हुँदोरहेछ । यो ‘यदि’ र ‘तर’ ले देशलाई नै समस्यामा पारिरहेको छ ।
‘यदि यसो भैदिएको भए, तर त्यस्तो भयो’ भनिन्छ । लगानीकर्ताहरूले यो कुरालाई राम्रोसँग पर्गेलेर लगानी गरे भने फाइदा लिन सक्छन् । यसलाई राम्ररी नबुझी बैंकमा लगानी गरेजस्तै वा त्यो भन्दा पनि छिटो नाफा कमाउने माध्यम हो भन्ने तरिकाले बुझ्दा समस्या हुन्छ ।
प्रचण्डजीले जे भन्नुभयो : अर्थ–राजनीतिक दृष्टिबाट हेर्दा उहाँले गलत कुरा गर्नुभएको होइन । गलत किन होइन भने पहिले ‘औद्योगिक पुँजी’ भनिन्थ्यो । पुँजी जति उद्योगहरूमा लगानी गरिन्थ्यो । यस्तो पुँजी कच्चा पदार्थमा पनि लगानी हुन्थ्यो, रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो, वस्तु उत्पादन हुन्थ्यो । खपत निम्ति माग पूरा गर्न सहयोग र बढी भए निर्यात पनि गर्न सकिन्थो । यसरी उद्योगमा लगानी गर्दा एकैपटक कम्तीमा चार/पाँचवटा चीज प्राप्त हुनसक्छ ।
तर, कालान्तरमा त्यसो भएन । यसरी ‘लामो समयसम्म पर्खेर बस्ने होइन’ भनियो । अहिले पनि नेपालका केही ठूला लगानीकर्ताहरू र कतिपय व्यापारिक घरानाहरू कृषितिर तानिन थालेका छन् । बुद्ध एअरले हवाइ सेवा र कृषिलाई समानान्तर हुनेगरी अघि बढाउन प्रयास गरिरहेको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले कृषि कम्पनी खोलेको छ । एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यानले नेपालगञ्जतिर धानलगायत कृषि उपज उत्पादन थाल्नुभएको छ । यसको अर्थ के हो भने, अन्यत्र लगानी गर्दा प्रतिफल लिन लामो समय पर्खिनुपर्ने, तर कृषिमा त कुनै बालीलाई राम्ररी पहिचान गर्दा तीन महिनामा प्रतिफल दिन्छ । साग लगाए २० दिनमै खान र बेच्न मिल्छ ।
तर, सेयरबजारमा ओइरिएको लगानी यो ढंगले प्रतिफल लिने खालको होइन । यो त वित्तीय पुँजीतिर जान लाग्यो । वित्तीय पुँजी भनेको पैसा कमाउनका लागि पैसामा नै लगानी गर्ने हो । बीमा, बैंक र लघुवित्तको शेयर मूल्य हेरौं : स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकको भन्दा कुनै लघुवित्तको सेयरमूल्य धेरै छ । पैसाले पैसा तान्ने कुरामा मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्र डोहोरिन थाल्यो । यसले उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी बढाउने कुरालाई दोस्रो/तेस्रो प्राथमिकतामा राख्यो । यस्तै संस्थाहरूलाई सपोर्ट गर्ने भएकाले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंक लगायत संस्थाहरू पनि वास्तवमा त्यस किसिमले अघि बढेका छन् । त्यसैले, प्रचण्डले यी संस्थालाई साम्राज्यवादी औजारहरू हुन् भन्नुभएको हो ।
हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रमा धैर्यतासाथ लगानको प्रतिफल पर्खेर बस्ने वास्तविक लगानीकर्ताहरू कम छन् । सेयरबजारका धेरै मानिसहरू कारोबारी (ट्रेडर) नै हुन् । आज लगानी ग¥यो, पाँच रुपैयाँ नाफा हुनासाथ त्यसलाई बेच्यो । यस्तो प्रवृत्ति हावी भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिका मानिसहरू सेयरबजारमा संख्यात्मक बढी भएपछि यसरी नै कमाउन हल्ला गर्नु स्वाभाविक हो । यसकै लागि उनीहरू ‘सेयरबजारलाई सपोर्ट नगर्नेलाई नो भोट’ सम्म भन्दै हल्ला मच्चाउँदैछन् । त्यो उग्र नारा हो, जुन सेयरबजारसँग सम्बन्धित नै छैन । सेयरको विषयलाई राजनीतिमा जोडिदिएपछि त नेताहरू लग्छन्, नीतिहरू त्यसैअनुसार बनाउँछन्, बैंक/वित्तीय संस्थाले जतिसक्दो धेरै रकम सेयरबजारमा हाल्छन् भन्ने उनीहरूको ध्येय हो । उनीहरूका लागि ब्याजदर पनि एकदमै कम हुनुप¥यो, अर्थात राज्य नै उनीहरूले भनेअनुसार चल्नुप¥यो । त्यो दिशामा बजार नगएपछि उनीहरूले सराप गर्ने कुरा अन्यथा होइन ।
निर्क्योल साथ मैले के भन्ने गरेको छु भने जसले सेयर बजारको फन्डामेन्टल विषयलाई बुझेर लगानी गर्नुभएको छ–उहाँहरूलाई प्रचण्डजीको भनाइले केही तातो नै लाग्दैन । लगानीकर्तालाई प्रचण्डको अभिव्यक्तिले छुँदै छुँदैन । तर, कारोबारी, आज लगानी गरेर भोलि नै प्रतिफल खोज्ने, त्यो पनि राज्यले सबै कुरा व्यवस्था गरिदिएपछि नाफामात्रै हामीले खाने हो भन्नेहरूलाई प्रचण्डको अभिव्यक्ति थप्पड हो ।
यस्ता कारोबारीहरूले राज्यलाई कर तिरेको भन्छन् । कर नै नतिरे त उनीहरूले सेयरमा खेला गर्ने ठाउँ पनि त हुँदैन । राजस्वकै लागि राज्य निकै उदार हुनुपर्ने हो भने यस्ता ठाउँ धेरै छन् । तर, कर उठाउनकै लागि राज्यले मुनाफाखोरको अनुकूल हुनेगरी नीति ल्याउने कुरै हुँदैन । राजस्व तिरेको भनी कारोबारीहरूले जुन दलिल राखेका छन्, त्यो कुनै तर्क नै होइन । यो देशमा गाँसबासका लागि संघर्ष गरिरहेका हरेक नागरिकले कर तिरिरहेका छन् ।
कारोबारीहरूले त बैंकले कता लगानी गर्नुपर्ने भन्नेसमेत आफैं निर्धारण गरिरहेका छन् । अर्काथरीले घरजग्गामा लगानी हुनुपर्छ भन्छन्, अर्काथरीले सवारीसाधनमा । सीमाभित्र रहेर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला, तर बैंकहरू यतातिर लालायित पनि छन् । होइन भने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहन भइरहेको छ । मैले हालै पश्मिना उद्योगी एक जनासँग कुरा गरेको थिए । उनी भन्दै थिए, ‘लौ न ! पश्मिना उद्योगका लागि ऋण चाहियो भन्दा बैंकहरूले १० प्रतिशत ब्याजदरमा पनि दिँदैनन् । मोटर किन्ने, घर बनाउने हो भने सात/आठ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋण दिन तयार छन् ।’
वारेन बफेटलाई संसारभरका सेयर लगानीकर्ताहरूले आदर्शपात्र या भगवान नै भन्ठान्छन् । उनले पनि लगानी गर्नुअघि आधार राम्रोसँग बुझ्न, स्थायित्व र प्रतिफलबारे सोच्न आग्रह गरेका छन् । तर, यहाँका कारोबारीहरूले त्यो पक्षलाई आत्मसाथ गरेकै छैनन् । नाफा कमाउने छिद्र, चाहे त्यो गैरकानूनी नै किन नहोस् : हात हालिहाल्छन् । जब फस्छन् : अनि आत्महत्या गर्नतिर लाग्छन् ।
यस्तो स्थिति हुँदा पनि प्रचण्डजीलाई मानिसहरूले गाली गर्न छाडेका छैनन् । त्यसैले, यो जसले हल्लाखल्ला गरे–उनीहरूलाई सेयर किनबेच र नाफासँग मात्रै मतलब छ । देशको आर्थिक स्थायित्व र आत्मनिर्भरताका कुरा उनीहरूलाई अपाच्य छ । किनकि, जसरी पनि कमाउनुप¥यो र राज्यभन्दा व्यक्ति वा समूह बलियो बन्नुप¥यो भन्ने विकृति छ । जसले फण्डामेन्टल बुझेको छ, उसलाई असर गर्दैन । जसले यो नबुझी कागले कान लग्यो भन्दा कान नै नछामी पछि दौडन्छन् – उनीहरूका लागि प्रचण्डको अभिव्यक्ति घातक देखिन गयो । अर्थ राजनीतिक दृष्ट्रिबाट हेर्दा वास्तवमा उहाँले नराम्रो कुरा गर्नुभएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।
सीमित व्यक्तिहरूको हातमा पुँजी केन्द्रिकृत हुने भन्ने प्रचण्डको विश्लेषण पनि गलत होइन । नेपालकै स्थिति हेरियो भने त्यो सजिलै बुझिन्छ । नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ३७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ । नेप्से सूचक ३२ सय अंक हाराहारीमा पुग्दा बजार पुँजीकरण ४३ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो । हुनलाई बैंकहरूको डिपोजिट पनि जीडीपीभन्दा माथि नै छ । तर, सेयरका नाममा पुँजी केन्द्रिकरण हुँदैछ भन्ने कुरालाई त त्यो तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ । एउटा कोठामा बसेर मोबाइल र इन्टरनेटका भरमा मानिसहरूले बजारको पैसा सजिलै तान्ने स्थिति आयो ।
वारेन बफेटलाई संसारभरका सेयर लगानीकर्ताहरूले आदर्शपात्र या भगवान नै भन्ठान्छन् । उनले पनि लगानी गर्नुअघि आधार राम्रोसँग बुझ्न, स्थायित्व र प्रतिफलबारे सोच्न आग्रह गरेका छन् । तर, यहाँका कारोबारीहरूले त्यो पक्षलाई आत्मसाथ गरेकै छैनन् । नाफा कमाउने छिद्र, चाहे त्यो गैरकानूनी नै किन नहोस् : हात हालिहाल्छन् । जब फस्छन् : अनि आत्महत्या गर्नतिर लाग्छन् । त्यसैले कान नसमाती कागको पछाडि लाग्नेहरू मर्कामा परेका छन् । फन्डामेन्टल बुझेकाहरूलाई प्रचण्डजीको भनाइले कुनै असर पारेको छैन ।
यति भन्दै गर्दा, फेरि पनि वास्तविक लगानीकर्ताहरूले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले सुस्ताएका, तर बजारमा जतिसुकैखेर भोल्क्यानो (ज्वालामुखी) विस्फोट गराउन खोज्नेहरूले खेल्न सक्छन् । उनीहरूले कुनै राम्रो कम्पनीको १० वटा सेयर ल्याएर फालिदिन्छन् । त्यसैमा सबै झुम्मिन्छन् । मानिसहरूले किनबेच गर्न थाल्छन् । त्यसपछि उनै ठूला लगानीकर्ताले फेरि सोही कम्पनीको सेयरको मूल्य घटाउन अनेक गर्छन् र घटेको सेयर आफैंले किन्छन् । के के गर्छन् भन्ने सबै कुरा यहाँ उल्लेख गरेर साध्य छैन । त्यसैले, लगानीकर्ताले ठूला चलखेलकर्ताहरूको चलखेलबारे जानकारी राख्नुपर्छ । यसबारे उहाँहरूले पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ ।
बैंकबाट पैसा लिएर शेयरबजारमा अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने दुई जनामात्रै रहेछन् । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगाउने करिब १६० जना छन् । मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितोमा दिने कर्जा (मार्जिन ल्याण्डिङ) मा ४/१२ को सीमा लगाएपछि राष्ट्र बैंकमाथि जसले आक्रमण गरे, त्यो बेकार हो । तीन करोड नेपालीहरूलाई ‘तिम्रो क्षमता छ भने हरेक बैंकबाट चार करोड रुपैयाँ लैजाऊ, सबै बैंकबाट गरेर १२ करोड रुपैयाँ पुँजीबजारमा हाल’ भनेर छोडिदिएकै छ । तर, कतिले त्यसलाई प्रयोग गरेका छन् त भन्दा यसबाट सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै लाभ लिएका छन् ।
पछिल्लो दुई वर्षदेखि हामी कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका छौं । नियन्त्रण निम्ति प्रतिबन्ध लगाउँदा अन्य क्षेत्र बन्द भयो । कोठामै बसेर भएभरको रकम सेयरमा हाल्नेहरू बढे । त्यतिखेर त्यही गर्नसक्ने अवस्था थियो । त्यतिखेर मानिसहरू मति कस्तोसम्म भयो भने ः बैंकमा खाता खोल्न फोटो चाहियो । छिमेकमै रहेका फोटोग्राफरकहाँ पहिले खिचेको फोटोको नम्बर लिएर गएको, पसले ल्यापटपमा सेयर हेरेर बसिरहेका थिए । स्क्रिन रातै थियो, अर्थात धेरैजसो कम्पनीको सेयर घटेको थियो । उनलाई फोटो निकालिदिन आग्रह गरेँ । तर भने, ‘यहाँ सेयरबजारमा निकै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको छ, पर्खनुस् ।’
सेयरको धुनमा उनले काम नगर्ने भएपछि म बैंकमा गएँ । ‘यस्तो भयो, फोटो भोलि ल्याएर दिँदा हुँदैन ?’ भनी सोधेँ । ती बैंकरले सेयरबजारकै विषयमा अर्को घटना सुनाए । उनका एक छिमेकीले बैंकबाट ५० लाख रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट लिएका रहेछन् । बैंकरले रकम स्याङ्क्सन गराएर मात्र नराख्न भनेछन् । कर्जा लिनेले लगानी गर्ने ठाउँ नभएको बताएछन् । बैंकरले सेयरबजारमा लगाउन सुझाव दिएछन् । उनले कुनै जलविद्युत आयोजनाको ५० लाखकै सेयर किनेछन् । केही समयमै उनले एक करोड रुपैयाँ नाफा कमाएछन् । बैंकबाट लिएको कर्जा तिरेर नाफा रकम सेयरबजारमै लगाएछन् । यहाँनेर, बैंकले दिएको पैसा न उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी भयो, न मानिसहरूले रोजगारी पाए ।
यस्तो स्थिति छ । सेयरबजारलाई ‘जुवाघर हो’ भनिदिँदा जतिसक्दो छिटो मुनाफा कमाउन खोज्नेहरूको टाउको दुख्ने गरेको छ । तर, वास्तवमा हाम्रो सेयर बजार जुवाघरभन्दा पनि बढ्ता भएको छ । साना लगानीकर्ताजति सबै हल्लाका पछि लागिरहेका छन्, ठूलाहरूले अनुचित किसिमबाट साना लगानीकर्ताको सेयरमूल्य घटाएर, आफैंले किनेर पुँजी एकीकृत गरिरहेका छन् । १० वर्षअघि नचिनिएका मानिसहरू अहिले अर्बपतिमा गणना भएका छन् । उनीहरूको आर्थिक उत्थानबाट न देशको, जनताको, न त अर्थव्यवस्थाको नै उत्थान भएको छ ।
(यो पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको व्यक्तिगत विचार हो)